Frantsay noterena hiala tsiny noho ny nanaovany lahatsary mandrabiraby ny fitondra-miaramila Thailandey · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2019 5:20 GMT
Noterena hanao fialan-tsiny sy hamafa ny lahatsarin-kirany malaza ao amin'ny YouTube izay maneso ny hiram-pirenen'ny governemanta tohanan'ny miaramila ny Frantsay iray miasa ivelan'ny fireneny.
Tamin'ny 10 Jona 2019 i Yan Marchal, mpandrafitra lalao videô izay efa nonina tao Bangkok nandritra ny 15 taona, no namoaka lahatsary iray tamin'ny YouTube izay manao ho mampihomehy ny hira fanevan'ny Vaomieram-pirenena ho an'ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana (NCPO). Naorina ny NCPO taorian'ny nandrobahan'ny miaramila ny fahefana tamin'ny taona 2014. Na dia notanterahana tamin'ity taona ity ihany aza izany fifidianana izany, dia mbola mifehy ny fitantanana ny biraon'ny governemanta ao amin'ny firenena ihany ny miaramila.
Ny lahatsary mitondra ny lohateny hoe ‘Fanavaozana ny hira fanefan'ny fitondra-miaramila’ dia fampihomehezana amin'ny hira ‘Mamerina ny fahasambarana ho any amin'ny vahoaka’ nosoratan'ny Jeneraly Prayut Chan-o-cha izay nitarika ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014 ary mbola filohan'ny governemanta ihany. Averimberina mandrakariva ao amin'ny radio sy ny TV io hira faneva io.
Talanjona i Marchal raha nalaza haingana sy vetivety io lahatsary io, ary notsipahany ny fiampangana fa mikendry ny hampiroborobo ny fankahalana tao amin'ny firenena izay iantranoany izy. Tao amin'ny valiny Facebook i Marchal niteny hoe:
Na teo aza izany dia namoaka tsanganana vaovao hafa izy tamin'ny 12 Jona milaza fa nanapa-kevitra hamafa ny lahatsary izy taorian'ny nanasoniavany memorandum iray nokarakarain'ny polisy. Nozarainy ary fa nitsidika azy tao an-tranony ny polisy ary nitondra memorandum izay nosoniaviny taty aoriana mba hialana amin'ny mety ho olana ara-pitsarana mety ho atrehiny. Ilay antota-taratasy moa dia fialan-tsinin'i Marchal noho ny namoahany ilay lahatsary izay ‘niteraka ratra’ ho an'ny NCPO sy ny Thailandey. Indro ny tsonga avy amin'ny lahatsoratry ny memorandum:
Nanoratra Marchal taty aoriana fa nahatsiaro ho voarahona izy taorian'ny nahazoana fanehoan-kevitra mankahala avy amin'ny mpanohana ny NCPO:
Nitatitra ihany koa ny Human Rights Watch fa efa nanery mpiantsehatra iray malaza amin'ny fampihomehezana sy mpianatry ny sekoly ambony sasantsasany ny manampahefana hamafa lahatsary amin'ny media sosialy maneso an'i Prayut sy ny NCPO. Naneho ny heviny ny vondrona:
Nisy ihany koa ireo hafa mpitsikera ny fitondra-miaramila notafihan’olon-tsy fantatra tamin'ny vola mey sy jona izay nanaitra ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona amin'ny fitohizam-pandrahonana mahazo ny zo haneho hevitra ao amin'ny firenena.
Ity ny lahatsarin’ilay hira faneva: